Ọ “Maara Ụzọ”​—Guy Pierce
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mauritian Creole Maya Mixe Mongolian Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Zulu
GUY HOLLIS PIERCE, bụ́ onye so n’Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova, jechara ozi ya n’ụwa na Tuzdee, abalị iri na asatọ n’ọnwa atọ n’afọ 2014. O nwere olileanya na ya ga-eso n’ụmụnna Kraịst a ga-akpọlite n’ọnwụ ka ha gaa eluigwe. Ọ dị iri afọ asaa na itoolu mgbe olileanya ahụ mezuru.—Hib. 2:10-12; 1 Pita 3:18.
A mụrụ Guy Pierce n’abalị isii n’ọnwa itoolu n’afọ 1934 n’obodo Ọbọn dị na Kalịfọnịa, n’Amerịka. E mere ya baptizim n’afọ 1955, ya alụọ Penny bụ́ ezigbo nwunye ya n’afọ 1977. Ha mụkwara ụmụ. Ezinụlọ o nwere mere ka ọ na-akpa àgwà ka nna. Ya na nwunye ya malitere ịsụ ụzọ n’afọ 1982. N’afọ 1986, ọ ghọrọ onye nlekọta sekit n’Amerịka. Ọ rụrụ ọrụ a afọ iri na otu.
N’afọ 1997, ya na nwunye ya bidoro ije ozi na Betel dị n’Amerịka. Nwanna Pierce rụrụ ọrụ na Ngalaba Ije Ozi. N’afọ 1998, a họpụtara ya ka o soro ná ndị na-enyere Kọmitii Na-ahụ Maka Ndị Na-arụ Ọrụ na Betel aka. N’abalị abụọ n’ọnwa iri n’afọ 1999, a mara ọkwa ná nnọkọ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania na-enwe kwa afọ na a họpụtala ya ka o soro n’Òtù Na-achị Isi. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, o jere ozi na Kọmitii Na-ahụ Maka Ndị Na-arụ Ọrụ na Betel, Kọmitii Ide Ihe, Kọmitii Mbipụta nakwa na Kọmitii Na-ahaziri Òtù Na-achị Isi Ọrụ.
Ụdị ndị dị iche iche na ndị si n’ebe dị iche iche na-akpa ya nso n’ihi na ihu na-abụ ya ọchị ọchị. Ọ bụkwa onye egwuregwu. Ma, ihe ndị kacha mee ka ihe ya masị ndị mmadụ bụ na ọ hụrụ ha n’anya, dịrị umeala n’obi, na-akwanyere iwu Jehova ùgwù, nweekwa okwukwe siri ike na Jehova. Obi siri Nwanna Pierce ike na o nweghị ihe ga-eme ka nkwa Jehova ghara imezu. Ọ chọkwara ịkọrọ ya ụwa niile.
Ike anaghị agwụ Nwanna Pierce n’ọrụ ọ na-arụrụ Jehova. Ọ na-ebido n’isi ụtụtụ rụgide ọrụ ruo n’abalị. Ọ gara ebe dị iche iche n’ụwa gbaa ụmụnna ume. N’agbanyeghị ọrụ niile ọ na-arụ, ọ na-ewepụta oge ka ya na ndị na-eje ozi na Betel na ndị ọzọ nọrịa. Ọ na-enye ha ndụmọdụ, na-enyekwara ha aka. Ụmụnna ndị ma ya kemgbe ọtụtụ afọ ka na-echeta otú ha na ya si dị n’ezigbo mma, otú o si ele ndị mmadụ ọbịa, na otú o si eji Baịbụl agba ha ume.
Ndị na-eru uju ọnwụ ya bụ nwunye ya, ụmụ isii ha nwere, ụmụ ụmụ ya, na ụmụ ụmụ ụmụ ya. E nwekwara ọtụtụ ndị ọ mụụrụ Baịbụl na ndị weere ya ka nna ha. E kwuru okwu olili ozu Nwanna Pierce na Satọdee, abalị iri abụọ na abụọ n’ọnwa atọ n’afọ 2014 na Betel dị na Bruklin. Ọ bụ Nwanna Mark Sanderson, onye so n’Òtù Na-achị Isi, kwuru ya. O kwuru ọtụtụ ihe gbasara Nwanna Pierce, kwuokwa na o nwere olileanya ịga eluigwe. Ọ gụkwara Jọn 14:2-4, bụ́ ebe Jizọs kwuru, sị: “N’ụlọ Nna m, ọtụtụ ebe obibi dị. . . . Ọ bụrụkwa na mụ agaa kwadebere unu ebe, m ga-abịa ọzọ, mụ onwe m ga-anabatakwa unu n’ebe obibi m, ka unu wee nọrọkwa n’ebe m nọ. Unu maara ụzọ ebe m na-aga.”
Ọ bụ eziokwu na anyị agaghị na-ahụ Nwanna Pierce, obi dị anyị ụtọ na ọ “maara ụzọ” “ebe obibi” ya na-adịru mgbe ebighị ebi.